भारतको राज्यसभाका आठ विपक्षी सांसद एक साताका लागि निलम्बन AahaKhabar
दशैँ तथा अन्य चाडमा के खाने, के नखाने ?
आज दसैंको मुख्य दिन विजयादशमी , उत्तम साइत १०ः१९ बजे
कोरोना जित्दै अस्पतालबाट घर फिर्ता भए अध्यक्ष थापा
२४ घण्टामा काठमाडाैं उपत्यकामा कति काेराेना संक्रमित थपिए ?
संक्रमित भन्दा काेराेनामुक्त हुनेकाे संख्या बढ्याे, कति थपिए आज ?
भारतको राज्यसभाका आठ विपक्षी सांसद एक साताका लागि निलम्बन
नयाँदिल्ली, ५ असोज । भारतको राज्यसभाका आठ विपक्षी सांसदहरू एक साताका लागि निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरू राज्यसभामा कृषि सुधार विधेयकबारे छलफल चलिरहँदा ताेडफाेमै उत्रेपछि अनुशासनहीनताको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन् ।
तोडफोडमा उत्रिनेमध्ये आठ जना सांसद निलम्बनमा परेको राज्यसभाका अध्यक्ष एम वेन्कैया नायडूले जानकारी दिए । साथै विपक्षीहरुले उपसभापति हरिवंशविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि खारेज गरिएको नायडूले जानकारी दिएका छन् । उनले आइतबारको दिन राज्यसभाको लागि निकै खराब दिन रहेको बताए । सांसद्मा छलफल चलिरहँदा विपक्षीहरुले गरेको प्रदर्शनपछि केही समय बैठक रोकिएको थियो ।
विपक्षी सांसदहरु उपसभापतिको आसनमा पुगेर उनलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नबाट रोकेको पनि नायडूले बताए । उनले भने, ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय छ । सांसदहरुसँग मेरो आग्रह छ कि उनीहरुले यो घटनाको लागि आत्मालोचना गर्नु जरुरी छ ।’
सप्तरीको कञ्चनरुपमा कोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिदा दुईको मृत्यु
मंगलवार, ११ कार्तिक २०७७
राष्ट्रपतिको शुमकामनाः स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर दशैं मनाउँ
सोमबार, १० कार्तिक २०७७
प्रधानमन्त्री ओलीले दिए दसैंको शुभकामना
आईतवार, ९ कार्तिक २०७७
कोरोनाबाट आज थप ५ जनाको मृत्यु, मृतककाे संख्या ८ सय ४७ पुग्याे
दशैंँ आयो, रौनक आएन
कर्णाली सरकारले लक्षण सहितका कोरोना संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने